Deepin OS 15.6 Ntinye Ntuziaka | Site na Linux
Deepin OS 15.6 ntuziaka nwụnye
Deepin OS maa bụ otu n’ime nkesa Linux ahụ O nwere otu ebe kachasị mma desktọọpụ gburugburu anyị nwere ike ịhụ na Linux. Maka ndị ahụ na-amataghị nkesa a, enwere m ike ikwu ihe ndị a.
Deepin bụ nkesa Linux nke ụlọ ọrụ China Wuhan Deepin Technology mepụtara, nke a bụ nkesa emepe emepe ma dabere na Debian, que ọ na-eji ya desktọọpụ gburugburu ebe obibi nke dị mma ma na-egbu maramara.
Nkesa a Ọ nwere ike ịbụ otu n'ime usoro GNU / Linux akwadoro maka ndị na-esi na Windows gaa ụwa Linux iji.
Y karịsịa maka ndị ahụ na-enweghị echiche bụ isi banyere Linux. Nkwado a dabere na Deepin nwere otu n'ime usoro ntinye kachasị dị mfe.
Ya mere, ọ dịghị achọ ihe karịrị inwe ihe bụ isi echiche nke ihe draịvụ ike gị bụ na ya partitions.
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ndị ọhụụ anaghị aghọta nke a na nke a bụ ihe kwere nghọta n'ihi na anyị niile na-agabiga n'oge a na mbido.
Ọ bụ ya mere ka soro ndi ohuru soro ntuziaka a di mfe.
Tupu ịmalite usoro nhazi, ọ dị oke mkpa na anyị maara ihe ndị anyị chọrọ iji nwee ike ịwụnye Deepin na kọmputa anyị.
Ihe sistemụ chọrọ iji wụnye Deepin OS:
Intel Pentium IV 2GHz processor ma ọ bụ karịa.
1GB nke RAM ma ọ bụ karịa maka arụmọrụ ka mma.
20GB nke ohere diski n'efu ma ọ bụ karịa.
A DVD agụ bụrụ na nke wụnye site na nke a.
USB n'ọdụ ụgbọ mmiri bụrụ na ị wụnye site na nke a.
1 Deepin OS 15.6 na-ebudata
1.1 DVD echichi media
1.2 Ihe ntinye USB
2 Echichi nke Deepin OS 15.6
Deepin OS 15.6 na-ebudata
Mara ihe ndị achọrọ na ijide n'aka na anyị nwere ha, anyị nwere ike ịga budata ISO nke sistemụ nke ị nwere ike ibudata na weebụsaịtị gọọmentị nke nkesa, njikọ ahụ bụ nke a.
DVD echichi media
Windows: Anyị nwere ike gbaa ISO ọkụ na Imgburn, UltraISO, Nero ma ọ bụ mmemme ọ bụla ọbụlagodi na enweghị ha na Windows 7 ma emesia ọ na-enye anyị nhọrọ iji pịa nri akanye na ISO.
Linux: You nwere ike iji ọkachasị nke na-abịa na eserese na gburugburu, n'etiti ha bụ, Brasero, k3b, na Xfburn.
Ihe ntinye USB
Windows: You nwere ike iji Universal USB Installer, LinuxLive USB Creator, Etcher nke ọ bụla n'ime ndị a dị mfe iji.
Linux: Nhọrọ a tụrụ aro bụ iji iwu dd:
Ọ bụ ezie na ịnwekwara ike ibudata Etcher ma kwado ọrụ a na mmemme a.
Echichi nke Deepin OS 15.6
Ozugbo etinyere usoro ntinye anyị, anyị ga-ahụrịrị na anyị nwere nhọrọ ị ga-esi na DVD ma ọ bụ USB n'ime BIOS nke sistemụ anyị.
Anaghị m emetụ isiokwu a aka n'ihi oke dị iche iche dị, ị nwere ike ịkpọtụrụ na netwọkụ ma ọ bụ na akwụkwọ ntuziaka nke nne gị / akụrụngwa otu esi enyere nhọrọ a aka, nke ị ga-ahụkarị na "Boot" ma ọ bụ "ntọala ntọala" taabụ.
Mgbe ịmalite kọmputa naanị anyị ga-ahọrọ nhọrọ mbụ bụ "Wụnye Miri", nke ọ ga-amalite ibudata ihe niile dị mkpa iji malite nrụnye na kọmputa anyị.
Mere nke a ga-edozi anyị na nhọrọ ịhọrọ asụsụ nrụnye na nke a ga-ahazi usoro ahụ. Mgbe ị na-ahọrọ asụsụ anyị pịa ọzọ.
En ndepụta ndị na-esonụ ga-ajụ anyị maka data ịmepụta onye ọrụ anyị nke anyị ga-arụ ọrụ na sistemụ ahụ, ọ dị mkpa ka ị cheta paswọọdụ gị ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị mkpa ịbanye na sistemụ ahụ, mana ọ ga-abụkwa onye ịchọrọ ịrụ ọrụ na ọdụ ahụ.
Nzọụkwụ ọzọ ga-agwa anyị ka anyị họrọ mpaghara oge anyị, anyị họrọ nke anyị ma pịa ọzọ.
Na usoro a, anyị ga-ahọrọ ọnọdụ nrụnye, ma ọ bụ ebe a na draịvụ ike niile ma ọ bụ na nkebi a kapịrị ọnụ.
Nhọrọ mbụ bụ ịrụ nrụnye dị mfe ebe anyị na-ahọrọ nkebi ma ọ bụ diski ebe anyị chọrọ ka arụnyere usoro.
Si anyị chọrọ ka echichi dị elu karị ma ọ bụ nkebi anyị ebe anyị chọrọ ịwụnye apụtaghị, ebe a anyị nwere ike hazie ya.
N'ebe a, a ga-egosi anyị niile nkebi dị ebe a, anyị nwere ike ịhọrọ ebe a ga-etinye ya ma hazie ya.
Anyị pịa gaa n'ihu ma ugbu a, anyị ga-echere echichi ka ịkwụsị ịmalite nkesa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Deepin OS 15.6 ntuziaka nwụnye
Ọbá akwụkwọ dị a environmentaa ka gburugburu gị dabeere?
Na DTK (Deepin Tool Kit), nke ọma C ++ na Qt
Zaghachi David Naranjo
Juan J. Garrido dijo
O yiri m ka ọ bụ akụkọ dara ogbenye. Anọ m na-atụ anya ịhụ ụfọdụ nseta ihuenyo nke nkesa karịa "ọ nwere otu gburugburu desktọọpụ mara mma anyị nwere ike ịhụ na Linux" Agbanyeghị, ọ bụ naanị nseta ihuenyo ole na ole nke nrụnye. M na-atụ anya na ị ga-aza ajụjụ banyere sọftụwia ọ nwere dịka ntọala na ịmata ihe ndị ahụ bụ naanị Deepin na-eweta.
Daalụ maka ọrụ gị
Zaghachi Juan J. Garrido
Ihe ị ga-eme mgbe ị wụnye Deepin OS 15.6
OpenShot 2.4.2 biara na ihe ohuru na ihe ohuru